KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Gitonga Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
“Bere a me kunu ka kyerɛɛ me sɛ ɔregyaa me akɔfa ababaa bi no, anka biribi reyɛ ayɛ me. Sɛ mekae brɛ a mabrɛ ne ho a, mete nka sɛ ɔne me anni no yiye koraa.”​—Maria, Spain.
“Bere a me yere gyaa me mpofirim no, asɛm no bubuu me koraa. Yɛn anidaso nyinaa yɛɛ ɔkwa, na nhyehyɛe biara a na yɛayɛ no gye gui. Ɛtɔ da a, na midwen sɛ dadwen biara nna me so bio, nanso wobɛhwɛ na mayɛ basaa a minhu nea menyɛ me ho.”​—Bill, Spain.
SƐ OBI kunu anaa ne yere sɛe aware a, ebetumi ayɛ no yaw pa ara. Ɛwom, awarefo no bi wɔ hɔ a, wɔde wɔn hokafo a wanni nokware nanso wanu ne ho no bɔne kyɛ no, na ɔne no ka bom bio. * Nanso sɛ́ awarefo no bɛsan aka abom anaa wɔrenyɛ saa no, asɛm no tumi haw nea ne ho nni asɛm no pa ara. Ɛbɛyɛ dɛn na nea ne ho nni asɛm no agyina tebea a ɛyɛ yaw saa no ano?
Ɛmfa ho sɛ awarefo a wɔn hokafo afa wɔn akyi no fa ateetee pii mu no, Bible no akyekye wɔn mu pii werɛ. Wɔabehu sɛ, nusu a wɔtew ne yaw a wodi nyinaa, Onyankopɔn nim.​—Malaki 2:13-16.
“Sɛ me mu dadwen yɛ bebree a, w’awerɛkyekye na ɛma me kra ani gye.”​—Dwom 94:19.
Bill kaa sɛ: “Bere a merekenkan saa asɛm no, metee nka sɛ Yehowa rekorɔkorɔ me, te sɛ agya bi a ɔdɔ ne ba.”
“Ɔnokwafo na wo ne no bedi no nokwaredi mu.”​—Dwom 18:25.
Carmen nso, ne kunu faa n’akyi abosome pii. Ɔkaa sɛ: “Me kunu anni me nokware, nanso migye di sɛ Yehowa de, obedi me nokware. Ɔremma me nsa nsi fam da.”
‘Munnnwinnwen biribiara nnhaw mo ho, na mmom momfa mpaebɔ ne nkotɔsrɛ so mfa mo adesrɛ nto Onyankopɔn anim ade nyinaa mu; na Onyankopɔn asomdwoe a ɛboro adwene nyinaa so no bɛbɔ mo koma ho ban.’​—Filipifo 4:6, 7.
Sasha kaa sɛ: “Mekenkan kyerɛwsɛm yi mpɛn pii. Bere a mekɔɔ so bɔɔ mpae no, Onyankopɔn maa minyaa akomatɔyam.”
Nnipa a yɛafa wɔn asɛm aka yi nyinaa, eduu baabi no, na wɔn abam reyɛ abu. Nanso wɔde wɔn ho too Yehowa Nyankopɔn so, na wɔmaa n’Asɛm hyɛɛ wɔn den. Bill nso, nea ɔkae ni: “Onyankopɔn a migye no di nti, ɛmfa ho sɛ na ɛte sɛ nea biribiara agye nsam no, minyaa abotɔyam. Ɛwom sɛ eduu mmere bi no, na ‘menam esum kabii bon mu’ de, nanso na Onyankopɔn ka me ho.”​—Dwom 23:4.
^ nky. 4 Nea ɛbɛboa wo ama woahu sɛ ɛsɛ sɛ wode wo hokafo a wafa w’akyi no bɔne kyɛ no anaa ɛnsɛ sɛ woyɛ saa no, hwɛ asɛm a wɔato din, “Bere a Ɔwarefo Bi Fi Ne Hokafo Akyi” a ɛwɔ Nyan! a ɛbae May 8, 1999 mu no.
Kenkan Bible mu nsɛm a ɛma awerɛkyekye, na dwinnwen ho.
Bill kaa sɛ: “Mekenkan Hiob nhoma no. Miwiei na mekɔɔ Nnwom nhoma no so. Sɛ mihu asɛm bi wɔ nea merekenkan no mu a ɛne m’asɛm no hyia a, na masan ase. Mihui sɛ yaw ne ateetee a na merefa mu no, Bible akyerɛwfo yi nso faa mu bi.”
Ɛyɛ a tie nnwom fa kyekye wo ho werɛ.
Carmen kaa sɛ: “Sɛ edu anadwo na mintumi nna a, na mitie nnwom. Ɛkyekyee me werɛ pa ara.” Daniel nso se: “Misuaa sɛnea wɔbɔ sanku (guitar), na muhui sɛ sanku no nnyigyei no boaa me maa minyaa asomdwoe ne ahotɔ.”
Ka w’asɛm kyerɛ afoforo.
Daniel kaa sɛ: “Ná menyɛ obi a metaa ka m’asɛm kyerɛ afoforo. Nanso na mewɔ nnamfo bi a me ho asɛm hia wɔn, na na meka m’asɛm kyerɛ wɔn da biara. Sɛ nneɛma hyɛ me so a, na mekyerɛw wɔn krataa, anaa me ne wɔn bɔ nkɔmmɔ ma wohu sɛnea mete nka. Ɛboaa me pa ara.” Sasha nso kaa sɛ: “M’abusuafo boaa me yiye. Me maame annyaw m’akyi di da. Sɛ merepɛ obi aka m’asɛm akyerɛ no a, na ɔyɛ aso tie me. Me papa nso kyerɛe sɛ ɔtaa m’akyi. Onyaa me ho abotare, na ɔboaa me ma nkakrankakra mitumi gyinaa tebea no ano.”
Nnyae mpaebɔ da.
Carmen kaa sɛ: “Mebɔɔ mpae daa. Metee nka sɛ Onyankopɔn anyi me baako anhyɛ me nsa, otiee me mpaebɔ, na ɔboaa me. M’amanehunu nyinaa mu no, mebɛn Onyankopɔn pa ara.”
Sɛ Wo Hokafo Fa W’akyi a, Ɛsɛ Sɛ Woma W’abam Bu Anaa?